ATỤMATỤ ATỤMATỤ ỤGHA NKE 76 NA 2019 - AKỤKỌ - 2019
Ndị mmepe dị na Bethesda nyere atụmatụ atụmatụ mmemme maka Fallout 76 shooter-MMO.
Ndị na-egwu egwu na-atụ anya ihe atọ zuru ụwa ọnụ, nke ọ bụla ga-ada n'otu oge n'afọ.
N'oge opupu ihe ubi a ga-enwe mmelite "Wild Appalachia". A ga-enwe ihe omume mbụ na March 12, a ga-enye ndị na-egwu egwuregwu ịṅụ biya na machibidoro "moonshine kernels" na egwuregwu ahụ. Omume ikpeazụ ga-abụ ọdịdị nke onye ahịa pụrụ iche na May 23, bụ onye ga-agbanwe ihe kachasị mma maka akụrụngwa gị. N'etiti etiti ụbọchị ndị ahụ, ihe omume ahụ bụ "Usoro nchịkwa nke anụ", ọrụ "Ịlanahụ", ihe omume ahụ "Paranormal Hoofed Horror" na ozi ọhụrụ ahụ bụ "Naanị nhazi!" Atụmatụ.
N'oge okpomọkụ nke afọ a, ntọhapụ ga-ahapụ ihe mgbakwunye "Winter Nuclear", nke a ga-eji akara nke oghere nke 96 na 94 rụọ ọrụ. N'ebe a, ndị mmepe na-eme atụmatụ itinye dungeons maka ndị egwuregwu dị elu.
Oge mgbede ga-akara na ntanetị ọdịnaya "Ndị bi n'ala ịkpa," bụ ndị ndị na-ede akwụkwọ na-ekwughị. Naanị anyị maara na na mkpọsa kachasị ahụ ga-abụ akụkọ ọhụrụ.